June 8, 2021 - Online Hartha
“ကွမ်းဂျိုးကို ငွေကြေးကုန်ကျမများပဲ အပြောင်ဖယ်ရှားနည်း”
June 8, 2021 by Online Hartha
ဒီနေ့တော့ ကွမ်းယာစားတဲ့ အမျိုးတွေအတွက် ဆေးနည်းလေးတစ်လက် ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကွမ်းယာ အစားများပြီး ကွမ်းဂျိုးတက်နေပါက အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။ဖရဲသီးမှ အဖြူသားအနည်းငယ်ကို ယူပါ။ ရေ ( ရေနွေးကြမ်းခွက်) တစ်ခွက်နှင့်အတူ ဆူပွက်အောင် ပြုတ်လိုက်ပါ။ထိုရေကို အနည်းငယ် အအေးထားပြီး သောက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ကွမ်းဂျိုးများ ဆီးနှင့်အတူ ပါလာပါလိမ့်မည်။တစ်ပတ်…နှစ်ကြိမ်ခန့်။ထိုရေကို ( ၁၀ ) မိနစ်ခန့် ငုံထားပြီး သွားတိုက်ပါက သွားများရှိ ကွမ်းဂျိုးများ ပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။တစ်ပတ်လောက် ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုကြည့်ပါ။ တစ်ပတ်…နှစ်ကြိမ်ခန့်။ကွမ်းစားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ရှိတယ်နော်။ ကွမ်းဂျိုးတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဖရဲသီး အပေါ်ယံက အဖြူသားတွေကို ကွမ်းတစ်ယာ စားတာလောက် ကြာအောင် ဝါးပြီး ငုံထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် သွားတိုက်လိုက်ပါ။အနည်းဆုံး ၃ ရက်မှ ၇ … Read more
ကား Accident ကြောင့် Taxi ယာဉ်မောင်း မိဘနှစ်ပါးလုံးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ကျန်ရစ်သူသားလေးရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ရာ…
ဇွန်လ (၇)ရက်နေ့၊မနေ့ညကဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့၊အင်းယားလမ်းမှာယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွါးခဲ့ပြီး (၃)ယောက်သေဆုံးကာ ကျန်တဲ့သူများလည်းဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Taxi မောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးကတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူအိမ်ပြန်မယ့်လမ်းမှာမိန်းကလေးတွေညဘက်ကြီးကားငှါးတာကို ကိုယ်ချင်းစာကာလိုက်ပို့ပေးခဲ့ရင်းဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းယားလမ်းမီးပွိုင့်မှာတော့ တစ်ဖက်မှလာတဲ့ကားကမီးနီကိုဖြတ်မောင်းပြီးTaxiကိုဝင်တိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Taxi ယာဉ်မောင်းဦးလေးကြီးကတော့ဆေးရုံးပေါ်မှာဆုံးပြီး သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မော်ဒယ်မေသစ္စာမောင်တို့ကတော့ လူနာတင်ယာဉ်ပေါ်မှာတင်ဆုံးပါးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။Taxiယာဉ်မောင်းတဲ့ လင်မယားမှာသားလေးတစ်ယောက်လည်းကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သားလေးကတော့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ Taxiကဝင်တိုက်တယ်ဆိုပြီးသတင်းအမှားတွထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ဖြေရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ရစ်သူလူငယ်လေးရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုကူညီဖေးမပေးပြီးကောလာဟလတွေမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုရေးတင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘနှစ်ပါးလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ကျန်ရစ်သူလူငယ်လေးက “အရင်လိုနိုးလာတိုင်းထမင်းချက်ထားမယ့်သူမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ဘာသာကြိုးစားရတော့မယ်” ဆိုပြီးသူငယ်ချင်းတွေကိုရင်ဖွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်းကား Accident ကြောင့် ကွယ်လွန်သွားရတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာTaxiကဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကအမှားသာဖြစ်ပြီးကျန်ရစ်သူလူငယ်လေးရဲ့ပူဆွေးသောကတွေကို ကိုယ်ချင်းစာရင်းအဖြစ်အပျက်အမှန်ကို ပြည်သူအများအပြားသိအောင်လို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Credit Myanmarload Unicode Version ဇှနျလ (၇)ရကျနေ့၊မနညေ့ကဆိုရငျတော့ရနျကုနျမွို့၊အငျးယားလမျးမှာယာဉျတိုကျမှုတဈခုဖွဈပှါးခဲ့ပွီး (၃)ယောကျသဆေုံးကာ ကနျြတဲ့သူမြားလညျးဒဏျရာအပွငျးအထနျရရှိခဲ့ပါတယျ။ Taxi မောငျးတဲ့ဦးလေးကွီးကတော့သူ့ရဲ့အမြိုးသမီးနဲ့အတူအိမျပွနျမယျ့လမျးမှာမိနျးကလေးတှညေဘကျကွီးကားငှါးတာကို ကိုယျခငျြးစာကာလိုကျပို့ပေးခဲ့ရငျးဒီလိုအဖွဈဆိုးမြိုးနဲ့ကွုံတှခေဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။အငျးယားလမျးမီးပှိုငျ့မှာတော့ တဈဖကျမှလာတဲ့ကားကမီးနီကိုဖွတျမောငျးပွီးTaxiကိုဝငျတိုကျလိုကျတယျလို့သိရပါတယျ။ Taxi ယာဉျမောငျးဦးလေးကွီးကတော့ဆေးရုံးပျေါမှာဆုံးပွီး သူ့ရဲ့အမြိုးသမီးနဲ့မျောဒယျမသေစ်စာမောငျတို့ကတော့ လူနာတငျယာဉျပျေါမှာတငျဆုံးပါးသှားတာဖွဈပါတယျ။Taxiယာဉျမောငျးတဲ့ လငျမယားမှာသားလေးတဈယောကျလညျးကနျြခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့သားလေးကတော့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ Taxiကဝငျတိုကျတယျဆိုပွီးသတငျးအမှားတှထှကျပျေါနတောကွောငျ့ပွနျလညျဖွရှေငျးနတောဖွဈပါတယျ။ကနျြရဈသူလူငယျလေးရဲ့သူငယျခငျြးတှကေလညျးသူ့ကိုကူညီဖေးမပေးပွီးကောလာဟလတှမေဟုတျကွောငျးဖွဈစဉျအမှနျကိုရေးတငျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ မိဘနှဈပါးလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ကနျြရဈသူလူငယျလေးက “အရငျလိုနိုးလာတိုငျးထမငျးခကျြထားမယျ့သူမရှိတော့ဘူးကိုယျ့ဘာသာကွိုးစားရတော့မယျ” ဆိုပွီးသူငယျခငျြးတှကေိုရငျဖှငျ့နတောဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတှကေလညျးကား Accident ကွောငျ့ ကှယျလှနျသှားရတဲ့သူတှအေတှကျစိတျမကောငျးဖွဈနကွေရတာဖွဈပါတယျ။ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာTaxiကဝငျတိုကျတယျဆိုတဲ့သတငျးကအမှားသာဖွဈပွီးကနျြရဈသူလူငယျလေးရဲ့ပူဆှေးသောကတှကေို ကိုယျခငျြးစာရငျးအဖွဈအပကျြအမှနျကို … Read more
ရှဝေါတဈခတျေ ပွနျလညျဆနျးသဈလာတော့မညျလား မွနျမာပွညျ…
ရွှေဝါတခေတ် တန်းစီစနစ် ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာရတော့မည်လား မြန်မာပြည် ဆပ်ပြာ၊ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့သွားတိုက်ဆေးတွေကိုနယ်စပ်ကနေတစ်ဦးချင်း တင်သွင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေကိုပိုမိုဈေးကွက်ရရှိစေဖို့ဆိုပြီးမြဝတီနယ်စပ်ကနေလူတစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်ခွင့်ITCကတ်နဲ့ဆပ်ပြာအပါအဝင်၊ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့သွားတိုက်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုတင်သွင်းခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီလို့ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေနဲ့ SMEလုပ်ငန်းတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ အခြားအပါအဝင်လူသုံးကုန်အချို့တင်သွင်းခွင့်ကိုမပြုတော့တာပါ။ ITCကတ်နဲ့နယ်စပ်ကနေတင်သွင်းခွင့်မပေးပေမယ့်လည်းကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ လိုင်စင်လျှောက်ထားပြီးတင်သွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိပါတယ်။ #Credit Unicode Version ရှဝေါတခတျေ တနျးစီစနဈ ပွနျလညျဆနျးသဈလာရတော့မညျလား မွနျမာပွညျ ဆပျပွာ၊ဆပျပွာမှုနျ့နဲ့သှားတိုကျဆေးတှကေိုနယျစပျကနတေဈဦးခငျြး တငျသှငျးခှငျ့ပိတျလိုကျပွီ ပွညျတှငျးထုတျကုနျတှကေိုပိုမိုဈေးကှကျရရှိစဖေို့ဆိုပွီးမွဝတီနယျစပျကနလေူတဈဦးခငျြး ကုနျသှယျခှငျ့ITCကတျနဲ့ဆပျပွာအပါအဝငျ၊ဆပျပွာမှုနျ့နဲ့သှားတိုကျဆေးအမြိုးမြိုးကိုတငျသှငျးခှငျ့ပိတျလိုကျပွီလို့ ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနကနသေိရပါတယျ။ပွညျတှငျးထုတျကုနျတှနေဲ့ SMEလုပျငနျးတှကေို အကာအကှယျပေးနိုငျဖို့နဲ့ အခွားအပါအဝငျလူသုံးကုနျအခြို့တငျသှငျးခှငျ့ကိုမပွုတော့တာပါ။ ITCကတျနဲ့နယျစပျကနတေငျသှငျးခှငျ့မပေးပမေယျ့လညျးကုမ်ပဏီမြားအနနေဲ့ လိုငျစငျလြှောကျထားပွီးတငျသှငျးနိုငျတဲ့အခွအေနမှောတော့ရှိပါတယျ။ #Credit
နစေရာ စားစရာ အခကျအခဲဖွဈလာလို့ ပရိတျသတျတှဆေီမှာ အကူအညီ တောငျးခံလာတဲ့ ကြျောကြျောနန်ဒ
ကျော်ကျော်နန္ဒကတောတော်လှန်ရေးကြီးမှာလမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့​ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့၅၀၅ကဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရတာကြောင့် လတ်တလောမှာရှောင်ပုန်းနေရပြီးနေရေးစားရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရကာအကူအညီတွေတောင်းခံလာပါတယ်။ ကျော်ကျော်နန္ဒဟာအခက်အခဲဖြစ်နေလို့သူကိုယ်တိုင်အကူအညီတောင်းထားတာဖြစ်ပြီး Accအဟက်ခံရတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုလည်းဆိုထားပါသေးတယ်။ ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့အခုလိုဒုက္ခရောက်ပြီးအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကူညီပေးကြသူတွေကို သူလွတ်မြောက်လာတဲ့တစ်နေ့ကျရင်Fb PageကနေLiveလွှင့်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောပြထားပါတယ်။ ။ Credit… M. M. H Unicode Version ကြျောကြျောနန်ဒကတောတျောလှနျရေးကွီးမှာလမျးပျေါထှကျလှုပျရှားမှုတှပွေုလုပျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူအရေးတျောပုံကွီးအောငျမွငျဖို့အတှကျတဈထောငျ့တဈနရောကနပေါဝငျအားဖွညျ့ခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။ တတျနိုငျသလောကျအငျတိုကျအားတိုကျပါဝငျခဲ့တဲ့​ကြျောကြျောနန်ဒကတော့၅၀၅ကဖွငျ့အမှုဖှငျ့အရေးယူခံထားရတာကွောငျ့ လတျတလောမှာရှောငျပုနျးနရေပွီးနရေေးစားရေးအခကျအခဲတှနေဲ့ကွုံတှနေ့ရေကာအကူအညီတှတေောငျးခံလာပါတယျ။ ကြျောကြျောနန်ဒဟာအခကျအခဲဖွဈနလေို့သူကိုယျတိုငျအကူအညီတောငျးထားတာဖွဈပွီး Accအဟကျခံရတာမဟုတျတဲ့အကွောငျးနဲ့ကြေးဇူးတငျစကားကိုလညျးဆိုထားပါသေးတယျ။ ကြျောကြျောနန်ဒကတော့အခုလိုဒုက်ခရောကျပွီးအကူအညီလိုအပျနတေဲ့အခြိနျမှာကူညီပေးကွသူတှကေို သူလှတျမွောကျလာတဲ့တဈနကေ့ရြငျFb PageကနေLiveလှငျ့ပေးသှားမယျဆိုပွီးတော့လညျး ပွောပွထားပါတယျ။ ။ Credit… M. M. H
နပေူကြဲကြဲကွီးထဲ သရကျတှအေျောရောငျးနတေဲ့ အဘှားကိုမေးကွညျ့လိုကျသောအခါ
ပျော်လိုက်တာ သားရယ်….. အဖွား ဘဝမှာ ပထမဆုံး တနေ့တည်း အကုန် ရောင်းရတဲ့နေ့ 😍😍😍 အဖွား…တစ်လုံး ဘယ်လောက်တုန်း? ၄လုံး ၁ ထောင်ကျပ်ပဲ ပေးပါ သားရယ် အဖွား နေပူတယ်နော်….😞 ဟုတ်တယ်…သားလေးရယ်….အဖွားက တ​ယောက်တည်းသမားဆိုတော့…ဒါလေးတွေ ရောင်းရမှ ထမင်းစားရမှာ 😢 အော….ဟုတ် အဖွား….အဖွား သရက်သီး ဘယ်နှလုံး ရှိတုန်း? ဗန်းထဲမှာ…၃၀လောက် ရှိမယ် ထင်တယ် သား…ခြင်းထဲမှာလဲ ၄၀လောက် ကျန်သေးတယ်ထင်တယ် သား…. ဟုတ်လား အဖွား….သား အကုန်ယူမယ်လေ…. သားကို ရောင်းပြီ အဖွား နေပူတယ် အိမ်စောစော ပြန်တော့လေနော်☺😇 သားလေး….ဘယ်နာရီရှိပီလဲ..ဟင်? (၁၀) နာရီ (၁၅) အဖွား….⏰ ဟယ်….အစောကြီးပဲ ရှိသေးတယ်…. ဟုတ်တယ်….အဖွားကို စောစော ပြန်နားစေချင်လို့ပါ 😇😍 … Read more
ရေကျော်ဈေးက လူအုပ်ထဲက ဘိုးတော်ကို လှောင်ပြောင်ကြတဲ့ လူငယ်များရဲ့ ထိတ်လန့်စရာဖြစ်ရပ်
နတ်တွေ သရဲတွေကို မယုံကြတဲ့လူက ခတ်များများ ရယ် အိမ်ကလူကြီးတွေကတော့ ခဏခဏမှာတယ် မယုံရင်လည်းနေ သွားပြီတော့ မလှောင်နဲ့ဆိုတာကို ဒါပေမဲ့ ခတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ မဟုတ်လားမသိ ကျွန်တော်တို့က လုံးဝကို အယုံအကြည်မရှိခဲ့ပါ ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန် မြို့မှာအရမ်းကို စည်တဲ့ ရေကျာ်ပွဲဈေး ကို ရောက်လာပါတော့တယ် ပွဲဈေးဆိုပြီးလာလည်တဲ့ လူက ခပ်များများဆိုတော့ ဖုံတွေကြားထဲမှာ တိုးရတာပေါ့ဗျာ. ကျွန်တော် က မသွားချင်ပေမဲ့ ပွဲတွေလမ်းတွေ သိပ်မရှိတော့လည်း သူငယ်ချင်းတွေ လူစုပြီး သွားကြည့်ကြရအောင်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ ဒီလိုနဲ့ ဟိုတိုး ဒီတိုးလုပ်နေရင်း လမ်းထိပ် နားမှာ ဆရာ!@#! ရဲ့ တပည့်အရင်း စတဲ့ ဟိုလို့ ရဲ့ တပည့် ဒီလူ့ရဲ့ တပည့်ဆိုတဲ့ သူများတွေကို ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြီး သူတို့ကြတော့ ဒီဘ၀ကနေ … Read more
နာမည်မှာ “K, A, N, P, S ” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ လျို့ချက်တစ်ခု ဖတ်ကြည့်လိုက်
နာမည်မှာ “K, A, N, P, S ” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ လျို့ချက်တစ်ခု ဖတ်ကြည့်လိုက်… (နာမည်မှာ K, A, N , P, S ပါတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက လျို့ဝှက်လက်နက် တစ်ခုပဲ) နာမည်မှာ K”A”N”P”S ပါတဲ့သူဆိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်Fb ပေါ်မှာချောပြီးအပြင်မှာ ချစ်စရာလေးတွေပါချစ်ရင်လည်းဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်ချစ်တတ်တယ်။ မုန်းတဲ့သူဆိုသူ့ရှေ့သေရင်တောင်လှည့်မကြည့်တဲ့လူစားမျိုး။စိတ်ညစ်ပြီဆိုတာနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်aနတတ်တယ်။ ပြောစကားဆိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းတည်တယ်။သူ့အပေါ်မတည်ရင်လည်းမကြိုက်ကြဘူး။ သူတို့ကိုသွားမချေနဲ့၁ဝဆပြန်ချေတက်ပါတယ်။ပေါင်းလို့သင်းလို့အရမ်းကောင်းပြီး စိတ်ထားလည်းဖြူစင်ကြတယ်အိပ်လိုက်စားလိုက်လိုင်းသုံးနဲ့တစ်ခါတစ်လေအထီးကျန်ဆန်ကြတယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးရိုးသားပြီးသစ္စာရှိကြတယ်။အိမ်မှာနေရင်ကလေးအပြင်ထွက်ရင် အကုန်ငေးလောက်အောင်လှတယ်။အားနည်းချက်တခုကလူတွေကိုယုံလွယ်တာပါပဲ လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်က မွေးရာပါပဲ(အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့သူတွေက ရှိသေး) သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ်လွယ်တယ်(ဒေါသထွက်လည်းခဏပဲ ပြီးရင်သူမဟုတ်သလိုနဲ့) နောက် နာမည်မှာ ”K”A”N”P”S” ပါနဲ့သူတွေရဲ့အားသာချက်က..၊ခလေးဆန်လွန်းတဲ့အပြုအမူလေးကြောင့် ချစ်မိသွားမယ်… (နေတတ်သလိုနေနေတာလေးကိုက အသဲယားစရာလေး)တွေးတွေးပြီးငိုတတ်တဲ့”Style”က ကြွေလောက်တယ် (ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုဆို”Version”ပြန်ပြန်မြှင့်လိုက်ရမှ)အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ယောင်နေတဲ့ ပုံစံလေးက ချစ်စရာလေး (မယုံရင် အသာလေးခိုးကြည့် ခွိ … Read more
တောထဲမှာ အကောင်တွေကိုက်ခံရလို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လူရွှင်တော်အဖွဲ့ ဟားငါးကောင်…
လူရွှင်တော်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် ဟာဒယရွှင်ဆေး တိုက်ကျွေးခဲ့သူကတော့ ပိုးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလအစကတည်း မှ စြ ပီး ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ် နေရာတွင် စစ် ပညာ သင် ကြားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။တောထဲမှာ နေထိုင်စဉ်အတွင်း သူတို့ရဲ့ နေထိုင်စားသောက်ပုံတွေကို ပြည်သူတွေ သိရှိရအောင် အမြဲလိုလို ဝေမျှပေးနေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကလည်း ပိုးလေးရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပုံလေးတစ်ပုံ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အကောင်တွေ အကိုက်ခံ ထားရတာကြောင့် ကျောပြင်တစ်ခုလုံး အနီစက်တွေနဲ့ အနာတွေပါ ပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ … Read more
ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ လုပျနတေဲ့ ဥက်ကဋ်ဌကအသဈနဲ့ ရုပျရှငျအစညျးအရုံးကို ထိမိတဲ့စကားလုံးတှနေဲ့ ပကျြရညျပွုခဲ့တဲ့ဇာတျပို့သရုပျဆောငျ ဆငျမ
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်က ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခန့်စည်သူကို ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရာထူး ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေဟာ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရာထူးအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေဟာ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေ နှုတ်ထွက်ကြောင်း ကြောငြာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ခန့်စည်သူဟာ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကို မထမ်းဆောင်လိုကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတော်တော်များများနဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖွင့်ဟတဲ့အထဲမှာ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဆင်မဟာလည်း သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကို ” နယကတို့ အုပ်ကြီးတို့အတွင်းမှူးတို့ရေ အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကော်ကော်သောက် ဓါတ်ပုံရိုက် လိုင်းပေါ်တင်ပြီးဆွေးနွေးကြပါဦး အူးတို့လုပ်တာနဲ့ တားတို့က မစူးစမ်းမလေ့လာဘူးပဲဖြစ်ရသေးတယ်…။ တားတို့တွေလည်း သူငယ်တန်းတော့ ကျက်ဖြေအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျ တားတို့က ရှေ့နောက်စဉ်းစားပြီးမှ အလုပ်ကိုလုပ်တာလုပ်ရင်လဲ အများတင်မဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာကြီးပါသိအောင် fb ပေါ်တင်ပလိုက်တာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုတာ အလုပ်လုပ်ရင် အများသဘောရယူရတယ်ဗျ အခုတော့ လား လား လား ထွက်ချီ ဝင်ချီ … Read more
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၏ မှနေ့အေ့ကွိုပှဲ ကငျြးပမညျ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက် ၇၆ နှစ် ပြည့်မွေးအထိမ်းအမှတ် မွေးနေ့အကြိုပွဲကို ဇွန် လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ အွန်လိုင်းကနေ ကျင်းပဖို့ နော်ဝေနိုင်ငံFrol and မြို့ရှိ Aung San Suu Kyi Park Committee က စီစဉ်နေပါတယ်… မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးနဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာစေခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွ အားလုံး အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တကမ္ဘာလုံးက စာနာထောက်ထားမှုနဲ့ အလေးအနက် တောင်းဆိုကြဖို့ရှိတယ်လို့ နော်ဝေနိုင်ငံမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဆရာတော် အရှင်ထာဝရက မိန့်ပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ အကြိုပြုလုပ်မယ့်ပွဲကို NUG နိုင်ငံတော်ဒုသမ္မတက သဝဏ်လွှာပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီး နော်ဝေဝန်ကြီးဟောင်းလဲ တက်ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်…။ #crd Unicode Version နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့အသကျ ၇၆ နှဈ ပွညျ့မှေးအထိမျးအမှတျ … Read more